Links များ၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်အွန်လိုင်း SEO ကိရိယာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးစွာသောကိရိယာများကိုအမြဲရှာဖွေနေပြီးဒေါ်လာ ၅ ဘီလျံရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ SEO သည်သင့်အားကူညီရန်ကိရိယာများစွာရှိသည်။ သင်သို့မဟုတ်သင့်ပြိုင်ဘက်များ၏နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများကိုသုတေသနပြုသည်ဖြစ်စေ၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့် cocurrence ဝေါဟာရများကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ site ကိုမည်သို့အဆင့်သတ်မှတ်သည်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေဤတွင်စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး SEO tools များနှင့်ပလက်ဖောင်းများဖြစ်သည်။
Search Engine Optimization Tools နှင့် Tracking Platforms တို့၏အဓိကလက္ခဏာများ
စာရင်းစစ်များ - SEO စစ်ဆေးမှုသည်သင်၏ site ကိုတွားသွားပြီးသင်၏အဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောပြissuesနာများကိုသင့်အားအသိပေးသည်။
Backlink အားသုံးသပ်ခြင်း - အကယ်၍ သင်၏ဆိုဒ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အခွင့်အာဏာညံ့ဖျင်းသောဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါကသင်သည်ဆိုးဝါးသောအချိန်သတ်မှတ်ချက်ရှိနိုင်သည်။ သင်၏ domains များသို့ညွှန်ပြနေသော link များ၏ပမာဏနှင့်အရည်အသွေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းသည်အဆင့်မြင့်ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆန်းစစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယှဉ်ပြိုင်သုတေသန - သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၊ သူတို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သူတို့၏ဒိုမိန်းနှင့်စာမျက်နှာများကိုသင်၏အရာနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ရန်ကွက်လပ်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း။
ဒေတာကိုသတ္တုတွင်း ဤပလက်ဖောင်းများစွာမှထူးထူးခြားခြားပျောက်ဆုံးနေသည်မှာအချက်အလက်များကိုမှတ်သားရန်၊ အမျိုးအစားခွဲရန်၊ စုစည်းရန်၊ အချက်အလက်ရှာဖွေရန်နှင့်အလွန်ကြီးမားသောသော့ချက်စာလုံးများကို ဖြတ်၍ အစီရင်ခံစာများရေးသားရန်ဖြစ်သည်။
Keyword ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည်သင့်အားတိကျသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များပေးသော်လည်းသူတို့သည်သင်သတိမပြုမိသောအဆင့်တွင်သင်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများကိုအဆင့်သတ်မှတ်မည်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။
သော့ချက်စာလုံးအုပ်စု - သော့ချက်စာလုံးအချို့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းကအလားတူသော့ချက်စာလုံးများစုစည်းခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးအပေါ်သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုအစီရင်ခံခြင်းကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်သောပုံရိပ်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သော့ချက်စာလုံးများစုစည်းခြင်းသည် SEO အဆင့်တွင်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်အရာများ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
keyword သုတေသန - သင်ပေးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သော့ချက်စာလုံးကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ သော့ချက်စာလုံးများသုတေသနပြုကိရိယာများသည်မကြာခဏပူးတွဲပါသောသော့ချက်စာလုံးများ၊ မေးခွန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်ပေါင်းစပ်မှုများ၊ အမြီးရှည်သောသော့ချက်စကားလုံးပေါင်းစပ်မှုများနှင့်သော့ချက်စာလုံး၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုပေးလေ့ရှိသည်။ ဆွဲဆောင်။
Keyword Ranking စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - သော့ချက်စာလုံးများကိုရိုက်ထည့်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှ၎င်းတို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်းသည်ပလက်ဖောင်းအများစု၏အဓိကလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုအများအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းစွမ်းရည်ကိုသင်ပြုလုပ်နေသည့်ကြိုးပမ်းမှုများသည်သော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုတိုးတက်စေ၊
ဒေသခံသော့ချက်စကားလုံးအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး - ရှာဖွေသူအသုံးပြုသူ၏တည်နေရာနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သောကြောင့်၊ သော့ချက်ကျသောသော့ချက်ကျသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်ပလက်ဖောင်းများစွာသည်သင်၏အဆင့်ကိုပထဝီအနေအထားအရခြေရာခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခြစ် & ပြည်တွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - ကွန်ရက်စာမျက်နှာအဆင့်ဆင့်၊ စာမျက်နှာတည်ဆောက်ခြင်း၊ စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းနှင့်အခြားဆက်စပ်သောပြissuesနာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောကိရိယာများသည်သိသာထင်ရှားမှုနည်းပါးသော်လည်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခါသင့်အားပြproblemsနာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။
အသံဝေစု - သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏ရှာဖွေမှုနှင့်လူမှုရေးပြောဆိုမှုများတွင်သင်၏ဝေစုကိုပြသရန်အတွက်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုခြေရာခံနိုင်သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာများကသင်ရှေ့သို့တက်နေလျှင်ပြသလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်သင်၏ရှာဖွေမှုမြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပေလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်၏ပြိုင်ဘက်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု - ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသင်ဆွဲဆောင်သောအာရုံသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်သင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအခွင့်အာဏာကိုများစွာပြသသည်မှာသဘာဝပင်။ SEO အသစ်များသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေးအကြားဆက်စပ်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
Youtube သုတေသန - မကြာခဏလျစ်လျူရှုခံရသည့် Youtube သည်ဗီဒီယိုရှင်းလင်းချက်များ၊ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများနှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှာဖွေနေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စားသုံးသူများရှာဖွေသည့်ခေါင်းစဉ်များပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ် ၂ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။
Search Engine ဝက်ဘ်မာစတာ Tools များစာရင်း
Bing မှ Webmaster Tools များ - ရှာဖွေရေးတွင်သင့်ဆိုဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ အခမဲ့အစီရင်ခံစာများ၊ ကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရယူပါ။
Google Webmaster Tools များ - သင်၏စာမျက်နှာများကိုဂူဂဲလ်၏မြင်နိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများကိုသင့်အားပေးသည်။
Links များ၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် SEO Tools များစာရင်း
AccuRanker ဂူးဂဲလ်နှင့် Bing ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများဖြင့်မည်သို့အဆင့်သတ်မှတ်မည်ကိုရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပါ။
အဆင့်မြင့်သော web အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်ဝယ်လိုအားအပေါ်လတ်ဆတ်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ Desktop, mobile နှင့် local search များအတွက်။ အဖြူရောင်တံဆိပ်အစီရင်ခံစာများသို့ကြင်ထုပ်ပိုး။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုသုံးနိုင်သည်။
Ahrefs Site Explorer - တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးနှင့်လတ်ဆတ်ဆုံးအညွှန်းကိန်း။ အညွှန်းကို ၁၅ မိနစ်တိုင်းတွင် update လုပ်သည်။
အာဏာပိုင် - သင်၏ SEO ရှာဖွေမှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်၊ ဒေသတွင်းနှင့်မိုဘိုင်းအဆင့်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိသောသော့ချက်စာလုံးများကိုပြန်လည်ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်နှင့်သော့ချက်စာလုံးဒေတာကိုသုံးပါ။
BrightEdge SEO ဆိုသည်မှာ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုမှဝင်ငွေကိုတိုင်းတာ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်စျေးကွက်များသို့တိုးမြှင့်နိုင်အောင်လုပ်ပေးသည်။
သိမှု SEO ဆိုသည်မှာ သင့်ရဲ့ link ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် link ကိုတည်ဆောက်ခြင်းရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မည်ဟုထူးခြားသော SEO ဆိုသည်မှာ features တွေ။
Colibri SEO မှမည်သည့်အသွားအလာနှင့် ၀ ယ်ယူသူများကိုပိုမိုရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းကိုသင့်အားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
စပယ်ယာ Searchlight SEO ဆိုသည်မှာအကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသော SEO platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားသူတို့၏ရှာဖွေမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အားပေးသည်။
Cuutio အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း - ဂူဂဲလ်ပေါ်တွင်သင်၏တည်နေရာအတိအကျနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေကိုသိရှိပြီးရလဒ်များကိုခြေရာခံပါ
သော့ချက်စာလုံးများကိုစူးစမ်းပါ အခမဲ့သော့ချက်စာလုံးရှာဖွေရေးကိရိယာတခုဖြစ်ပြီး၊ အသံအတိုးအကျယ်စစ်ဆေးရေး၊
Ginzametrics စီးပွားရေးလုပ်ငန်း SEO ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်စေသည်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုမှအသွားအလာကိုထိထိရောက်ရောက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
gShift ၏ SEO ဆော့ (ဖ်) ဝဲစနစ်သည်သင့်ဖောက်သည်များ၏ SEO အချက်အလက်များ (ရာထူး၊ နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ လူမှုအချက်ပြမှုများ၊ အပြိုင်အဆိုင်ထောက်လှမ်းရေး၊ ဂူဂဲလ် Analytics နှင့်သော့ချက်စာတမ်းသုတေသန) ကိုဗဟိုပြုပြီးအလိုအလျောက်စီစဉ်ထားသည့်အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ထားသော SEO အစီရင်ခံစာများကိုသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် SEO လုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်ပိုပေးသည်။ သင့်ဖောက်သည်များ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
ခင်ဗျား - အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးတတ်နိုင်သော backlink tracker
ညား SEO ဆိုသည်မှာ SEO နှင့် Internet PR နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ဆိုက် Explorer သည်အဝင် link နှင့် site အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်များကိုပြသည်။
Meta မှုခင်းဆေးပညာ Meta Forensics ဆိုသည်မှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ပုံ၊ internal link analysis နှင့် SEO tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ visitors ည့်သည်များ၊ search engine crawlers နှင့်သင့် site ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သောပြwebsiteနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီသည်။
Backlinks စောင့်ကြည့် - သင်၏ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများနှင့်အတူအမိုးတစ်ခုအောက်တွင်ထားပါ။
Mosiah ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်အတန်းရှိ SEO ဆော့ဝဲလ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ All-In-One SEO platform မှဒေသခံ SEO၊ စီးပွားရေး SERP analytics နှင့်အစွမ်းထက်သော API အတွက်ကိရိယာများအထိ။
မင်္ဂလာပါ - ၀ ယ်သူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်နာများ၊ SEO အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အေဂျင်စီများမှသူတို့၏ SEO ဖောက်သည်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသော SEO software ။
Netpeak စစ်ဆေးသူ - အစုလိုက်အပြုံလိုက် SEO စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ဘက်စုံသုံးသုတေသနပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာတွင်ပြိုင်ဘက်များ၏မြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုပရိုဖိုင်းကိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုထားသောထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။
နိုက်ကလပ် - SEO စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ tracker နှင့် analytics tool
အွန်တိုလို ကျွန်ုပ်တို့၏ Link Building Toolset သည် SEO နှင့်ထိပ်တန်း SEO ကျွမ်းကျင်သူများကအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်များအတွက်မကြာခဏအကြံပြုသောအင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှုကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Posirank - ကျွန်ုပ်တို့၏လက္ကားပလက်ဖောင်းသည်စိတ်ကူးနိုင်သည့် SEO ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကို dashboard တစ်ခုထဲသို့စုစည်းပေးရုံသာမကစုစုပေါင်းအလိုအလျောက်လည်းပံ့ပိုးပေးသည်။
ရာထူး သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပါ၊ SEO စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာပါ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
Pro အဆင့်အတန်းခြေရာခံသူ - သင်၏နောက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်ကိုရယူပါ။ သို့မှသာပြိုင်ဆိုင်မှုကို ကျော်လွန်၍ သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သည်။
RankAbove's Drive SEO ပလက်ဖောင်းနှင့်စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သင့်လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိနှင့်ပြီးသော SEO သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။
ရာထူး - သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နေရာများကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုလူကြိုက်များသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီဆန်းစစ်ပါ။
ရာထူး - နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာများနှင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုများကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း
RankScanner - ဂူဂဲလ်တွင်သင်၏သော့ချက်စာလုံးများ၏အနေအထားများကိုအခမဲ့အကောင့်ဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
SpySERP မှအဆင့်သတ်မှတ်သူ - SEO ရှာဖွေသူများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ရှာဖွေမှုအင်ဂျင်များအကြားအတွင်းပိုင်းလမ်းကြောင်းကို SEO ရှာဖွေသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
RankSonic - သင်၏အဆင့်တွင်နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုများကိုစစ်ဆေးပါ၊ အဆင့်မြင့်သော site ကိုရယူပါ analyticsသင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုစူးစမ်း။ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
အဆင့် - အဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ backlink လက်ပတ်နာရီ၊ သော့ချက်စာလုံးအကြံပြုချက်များ၊ အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊
တောကျီးကန်း ဒီအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရလာဒ်တွေရအောင်ကူညီဖို့ကိရိယာ ၃၀ ကျော်ရှိတယ်။
ရီယို SEO ထိပ်တန်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အေဂျင်စီများအတွက်အော်ဂဲနစ်၊ ဒေသတွင်းရှာဖွေမှု၊ မိုဘိုင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများအနှံ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေမှုအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အကောင်းဆုံး SEO ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေး - ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုရေး analytics ဆော့ဖ်ဝဲ Searchmetrics Suite သည်ဒေတာအခြေပြုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်စျေးကွက်သမားများနှင့် SEO များအားအမျိုးသားအဆင့်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SEO လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ရန်နှင့်စျေးကွက်ဝေစု၊ ဝင်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်စေသည်။
SEOCHECK.io - သော့ချက်စာလုံး ၅၀ အထိကိုခြေရာခံရန်အခမဲ့သော့ချက်စာလုံးစစ်ဆေးမှုကိုစစ်ဆေးသည်။
ရောင်းသူ - အေဂျင်စီများနှင့်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားပလက်ဖောင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးရန်အဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်သောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြွေ - SERPs တွင်သော့ချက်စာလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံရန်ကိရိယာတစ်ခု။ ယှဉ်ပြိုင်မှုခြေရာခံခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
မြဝတီ - SEO စာရင်းစစ်များ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာသုတေသန၊ Backlink အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ရာထူးခြေရာကောက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့် All-in-one SEO platform တစ်ခု။
နေပြည်တော် - linkbuilding၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာရင်းစစ်နှင့်သော့ချက်စာလုံးစောင့်ကြည့်မှုအတွက် SEO ကိရိယာ။
နင် - သန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်။ တိကျသည်။
SE အဆင့် - တည်နေရာနှင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ခံနိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်။
Semrush SEO / SEM ပညာရှင်များအတွက် SEO / SEM ပညာရှင်များကဖန်တီးသည်။ သင်၏စီမံကိန်းများကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်အောင်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အချက်အလက်ရှိသည်။ သူတို့သည်သန်း ၁၂၀ ကျော်သောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်သန်း ၅၀ ဒိုမိန်းများအတွက် SERP အချက်အလက်အမြောက်အများကိုစုဆောင်းသည်။
SEO ကုလားအုတ် - Seo ကုလားအုတ်သည်သင်၏ (သို့) သင်၏ပြိုင်ဘက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အကောင်းဆုံးကိုအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
SEO အဆင့်အဆင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူ - သင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပါ၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုခြေရာခံပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးခြေရာခံခြင်းဖြင့် SEO စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
SeoSiteCheckup.com - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်သင့်ဆိုဒ်၏ SEO ကိုစစ်ဆေးခြင်း။
SERP Scan ကို - သင့်အတွက်အရေးကြီးသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အနေအထားကိုခြေရာခံသည်။
နေပြည်တော် - သင်၏ထိပ်တန်း 20+ ရလာဒ်အားလုံးကိုသင်၏သော့ချက်စာလုံးများအတွက်စောင့်ကြည့်ပြီးပြိုင်ဘက်များကသူတို့၏နောက်ကျောများ၊ လူမှုရေးအချက်ပြမှုများ၊ အဆင့်များနှင့်အခြားအရာများကိုတိုးမြှင့်သောအခါသတိပေးချက်များရယူပါ။
ရွေးချယ်စာရင်းမက်ထရစ် - သင်၏ linkbuilding ကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခု။
ဆိုက်ကိုစကုပ် - ပြိုင်ဘက်ခြေရာခံခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အစီရင်ခံခြင်း။
SerpStat Keyword Suggestion Tool - စိတ် ၀ င်စားစရာထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေသောလူများအသုံးပြုသောလူကြိုက်များသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်သူတို့၏ပုံစံများ။
SpyFu သင်၏အအောင်မြင်ဆုံးပြိုင်ဘက်များ၏ရှာဖွေရေးစျေးကွက်လျှို့ဝှက်ပုံသေနည်းကိုဖော်ထုတ်သည် မည်သည့်ဒိုမိန်းကိုမဆိုရှာဖွေပြီးဂူးဂဲလ်တွင်သူတို့တွေ့ခဲ့သည့်နေရာများ၊ Adwords၊ အော်ဂဲနစ်ရာထူးများနှင့်လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်အတွင်းကြော်ငြာအပြောင်းအလဲများတွင်သူတို့ဝယ်ခဲ့သောသော့ချက်စာလုံးတိုင်းကိုကြည့်ပါ။
SyCara ရဲ့ SEO ပလက်ဖောင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုလုပ်ငန်းခွင် ဦး ဆောင်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒေသတွင်းရှာဖွေမှုအဆင့်များ၊
အလွန်သေးငယ်သောအဆင့် - သင်၏အဆင့်နှင့်ခြေရာခံ SEO အားထုတ်မှုများကိုခြေရာခံပါ။
ကျောက်တုံး - ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် Analytics ဆော့ဝဲ။ သော့ချက်စာလုံးရေ ၂၀၀ ခန့်ကိုအခမဲ့ရယူပြီးစမ်းကြည့်ပါ။
Unamo - ယာဉ်အသွားအလာပိုမိုရရှိရန်၊ သင်၏အဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုနောက်ကွယ်တွင်ထားခဲ့ပါ။
မြို့ပြ - UpCity သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၊ လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များမှအခမဲ့သွားလာမှုကိုကူညီနိုင်သည်။
WebMeUp SEO ကိရိယာများသည်အွန်လိုင်း SEO ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အဆင်ပြေမှုနှင့် desktop application များသာပေးနိုင်သည့်အချက်အလက်ကြွယ်ဝမှုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
My Serp ဆိုတာဘာလဲ - WhatsMySerp ၏အခမဲ့ SERP စစ်ဆေးမှုသည်သော့ချက်စာလုံးပေါင်းများစွာအတွက်ထိပ်ဆုံးဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုရလဒ် ၁၀၀ ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ SERPs များကိုဆန်းစစ်ရန်နှင့်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်၏အနေအထားကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
WooRank ဆိုလိုသည်မှာသင်၏သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်သင်၏အင်တာနက်စျေးကွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည့်အချက် ၁၀၀ ရှိသောစကေးပေါ်တွင်တက်ကြွသောအဆင့်ဖြစ်သည်။ (ပျမ်းမျှရမှတ် ၅၀ ဖြစ်သည်။ ) WooRank သည်သော့ချက်စာလုံးများမှသည်အသုံး ၀ င်မှုနှင့်လူမှုစောင့်ကြည့်မှုအထိအချက် ၇၀ ကို ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ WooRank ပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်သင့်အားအွန်လိုင်းကမ္ဘာကြီးကိုမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုမှကာကွယ်ရန်အဖိုးတန်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပေးသည်။
Wordtracker ပါ SEO နှင့် PPC၊ သော့ချက်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများအတွက်သော့ချက်စာလုံးများသုတေသနကိရိယာများကိုပေးသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤပလက်ဖောင်းအချို့နှင့်တွဲဖက်ထားသောအကောင့်များရှိသည်။
Tags: အောင်နိုင်သူahrefsအာရှ seoအာဏာပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းများအာဏာပိုင်backlink ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာbacklink ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုbacklink ဝန်ဆောင်မှုနောက်ကြောင်းပြန်website ရဲ့ backlinkအကောင်းဆုံး keyword ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် tool ကိုအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း seo tools များwebmasters bingဟုတ်ပါတယ်SEOစပယ်ယာ vs brightedgeသော့ချက်စာလုံးအဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါသော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးပါအဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါseo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးပါဟင်colibri SEOcolibri SEO ကိရိယာများယှဉ်ပြိုင်သုတေသနထိန်လင်းချစ်သူနဂါးမက်ထရစ်Firefox ရာထူးချက်အခမဲ့သော့ချက်စာလုံးအဆင့်အခမဲ့သော့ချက်စာတန်းရာထူးစစ်ဆေးအခမဲ့သော့ချက်စာလုံးအဆင့်အခမဲ့ keyword ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် tool ကိုအခမဲ့ keyword ကိုခြေရာခံအခမဲ့ရာထူးစစ်ဆေးအခမဲ့ရာထူး trackerအခမဲ့ seo ရာထူးစစ်ဆေးginzametricsGoogle keyword ကိုခြေရာခံကိရိယာgoogle အဆင့် trackergoogle seo ရာထူးစစ်ဆေးgoogle webmaster များgshiftgshift ဓာတ်ခွဲခန်းgshiftlabsသော့ချက်ကျတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသော့ချက်စာလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုသော့ချက်စာလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာသော့ချက်စာလုံးအနေအထား trackerသော့ချက်စာလုံးအနေအထားခြေရာခံခြင်းkeyword စီမံကိန်းမန်နေဂျာkeyword rank စစ်ဆေးမှုသော့ချက်အဆင့်အဆင့်စစ်ဆေးကိရိယာkeyword rank software ကိုသော့ချက်အဆင့်ရာထူး trackerkeyword rank ခြေရာခံခြင်းkeyword ကိုခြေရာခံ software ကိုkeyword ranking စစ်ဆေးမှုသော့ချက်စာလုံးအဆင့်အစီရင်ခံစာသော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာများkeyword ကိုအဆင့်သတ်မှတ်တဲ့ software ကိုkeyword ranking tool ကိုအခမဲ့keyword ranking tools များသော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်သည့်လမ်းကြောင်းသော့ချက်စာလုံးအဆင့် tool ကိုkeyword ကိုသုတေသနပြုသော့ချက်စာလုံးအကြံပြုချက်ကိရိယာသော့ချက်စာလုံးကိရိယာများသော့ချက်စာလုံးခြေရာခံခြင်းသော့ချက်ခြေရာခံခြင်း softwareသော့ချက်ခြေရာခံကိရိယာkeyword tracking tools တွေlink တည်ဆောက်ခြင်းခင်ဗျားညားအံ့ဖွယ် seometa မှုခင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်moz ရာထူးစစ်ဆေးပိုက်ကွန်အွန်လိုင်းအဆင့်စစ်ဆေးအွန်လိုင်းအဆင့် trackerအွန်လိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် tool ကို.ရာဝတီစာမျက်နှာတစ်ခု seoစာမျက်နှာအဆင့် trackerirရာဝတီလိုလားသူအဆင့်ခြေရာခံရာထူးစစ်ဆေးသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ခရုမ်းအဆင့်စစ်ဆေးကိရိယာအဆင့်စစ်ဆေးနေ software ကိုအဆင့်စစ်ဆေးနေ tool ကိုkeyword ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော software ကိုရာထူးခြေရာခံအခမဲ့ track rankseo ရာထူးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ် tracker software ကိုအဆင့်သတ်မှတ် tracker tool ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် software ကိုရာထူးခြေရာခံ tool ကိုအဆင့်အတန်းခြေရာခံ tools တွေကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးမှုများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ software ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော software ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် tools တွေကိုအဆင့်သတ်မှတ် trackerရာထူးအဆင့်စကင်နာအဆိုးဆုံးမှတ်ချက်တောကျီးကန်းRaven Tools များနေပြည်တော်အချိန်မှန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သတင်းပို့ရီယို seose intelse အဆင့်search engine အနေအထား trackerရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကို trackerရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရာထူးခြေရာခံရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဆော့ဝဲရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ဆော့ဖ်ဝဲရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်semrushseo ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာseo အာရှseo စာအုပ်ရာထူးစစ်ဆေးseo စာအုပ်ကိရိယာများseo browserseo ကုလားအုတ်seo သော့ချက်စာလုံးအဆင့်မြင့် tool ကိုseo သော့ချက်စာလုံး trackerse keyword ကိုခြေရာခံခြင်းseo စီမံခန့်ခွဲမှု tool ကိုseo စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများseo ပလက်ဖောင်းseo အနေအထားစစ်ဆေးseo ရာထူးချက်seo ရာထူးမော်နီတာseo ရာထူးအစီရင်ခံစာseo ရာထူး software ကိုseo ရာထူး tool ကိုseo ရာထူး tools များseo ရာထူးခြေရာခံseo ရာထူးခြေရာခံseo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်se ranking မော်နီတာseo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ software ကိုse ranking softwareseo အဆင့်သတ်မှတ်ချက် tool ကိုseo အဆင့်သတ်မှတ်ချက် tools တွေကိုseo အဆင့်သတ်မှတ်ချက်seo အစီရင်ခံစာဆော့ဝဲseo သတင်းပို့ software ကိုseo tool ကိုရာထူးစစ်ဆေးseo tools များseo tools တွေကိုစစ်ဆေးအဆင့်အတန်းseo tracker ပါseo ခြေရာခံseo ခြေရာခံ softwareseo ခြေရာခံခြင်း tool ကိုseo ခြေရာခံခြင်း tools များseobook ရာထူးစစ်ဆေးချစ်သူseocheck.ioseomozseomoz လိုလားသူseomoz လိုလားသူ tools တွေကိုseomoz tools များလှိုင်serp ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာserp scan လုပ်ပါမြွေserps.comမြဝတီနေပြည်တော်ဆန်ခါတင်စာရင်းsiteoscope ကြည့်တယ်မင်္ဂလာပါspyserpအလွန်သေးငယ်သောအဆင့်ကျောက်တုံးအီးမေးလ်များကိုခြေရာခံသော့ချက်စာလုံးအဆင့်ကိုခြေရာခံသော့ချက်စာလုံးများကိုခြေရာခံtwitter သော့ချက်စာလုံးကိရိယာမင်မြို့ပြဝဘ်ဆိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဆော့ဝဲ.ရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် software ကိုwordtrackerYouTube သော့ချက်စာလုံးများ
Semrush ကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေမှုရလဒ်များအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သင်၏ဆိုက်တွင် SEO အခွင့်အလမ်းများကိုမည်သို့ခွဲခြားသိမြင်ရမည်နည်း
မတ်လ 27, 2013 မှာ 10: 29 AM
ဒါကောင်းတဲ့စာရင်းပါ ငါ SEO အကြောင်းလေ့လာရန်ဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာပြသလိုက်ပြီပဲ!
မတ်လ 27, 2013 မှာ 2: 07 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO ဆောင်းပါးသည်သင်လိုအပ်တာကိုသင့်အားပေးသင့်သည်။
မတ်လ 28, 2013 မှာ 3: 45 AM
ဂရိတ်စာရင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ webceo ပျောက်နေပြီလို့ထင်တယ်၊ အဲဒါကသင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့အွန်လိုင်း seo ကိရိယာကောင်းကောင်းတခုဖြစ်တယ်။
မတ်လ 28, 2013 မှာ 8: 08 AM
မတ်လ 28, 2013 မှာ 10: 06 AM
မင်္ဂလာပါဇက်၊ ကျွန်ုပ် WebCEO ကိုစစ်ကြည့်ပြီး၎င်းသည် Windows အတွက် desktop platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမှာအွန်လိုင်းကိရိယာများကိုအာရုံစူးစိုက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မတ်လ 28, 2013 မှာ 5: 30 AM
၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးနေသောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည် - ဤစာရင်းသည်ရေခဲတောင်၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလားတူအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုသော်လည်းဒေသတွင်း SEO အတွက်ကိရိယာများနှင့်သက်ဆိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်သင်ကြားရေးအတွက်ကူညီရန်အသင့်ရှိပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်ဂလပ်
SERP Scan ကို
ဧပြီ 2, 2013 မှာ 5: 42 pm တွင်
ဟေ့၊ SERP Scan မှာငါတို့ဒေသအဆင့်ရာထူးခြေရာခံတဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒေါက်ဂလပ်အပါအဝင်မဆိုအခွင့်အလမ်း? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဧပြီ 2, 2013 မှာ 10: 56 pm တွင်
အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသည်ကြီးစွာသော toolset နဲ့တူတယ်။
iPhone အတွက် Mailbox မှပေးပို့သည်
ဧပြီ 3, 2013 မှာ 4: 56 pm တွင်
မေလ 27, 2013 မှာ 4: 21 AM
WebMeUp၊ ဒေါက်ဂလပ်အပါအ ၀ င်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စကားမစပ်, ကျနော်တို့လူမှုမီဒီယာ module တစ်ခု WebMeUp ထဲသို့ထည့်ပြီးပြီ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SEO ဆော့ဗ်ဝဲသက်သက်မဟုတ်ဟုပြောနိုင်သည်။ 😉
24:2013 pm မှာဇွန် 1, 01
ကျွန်ပ်တို့ဖောက်သည်များအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်သည်ကိရိယာနှစ်စုံအသုံးပြုခဲ့သော်လည်းအကန့်အသတ်မဲ့သော့ချက်စာလုံးများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုခြေရာခံနိုင်သည့်အကြံဥာဏ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ e-commerce portal အတွက်သောင်းနှင့်ချီသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
24:2013 pm မှာဇွန် 8, 24
ထိုအရွယ်အစားတွင်အလုပ်လုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် conductor @disqus_wFlYDncKKH: disqus ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စျေးသိပ်မကြီးသည့်အပြင်ကောင်းမွန်သောအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းနှင့်သတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာ module များရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဆင့်အတန်းခြေရာခံခြင်း scripts များကိုလည်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကထိုဝန်ဆောင်မှုများကိုတတ်နိုင်သမျှပိတ်ဆို့ရန်ကြိုးစားသည့်အတွက်နှလုံးရောဂါမဖြစ်နိုင်ပါ။
18:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 22
Tool Douglas ၏ထူးကဲသော SEO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်! WebMeUp ဟာကျွန်တော့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့် Market Samurai
18:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 03
LXR Marketplace တွင်ကိုယ်ပိုင် SEO ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ထားသောကြီးမားသည့်ကိရိယာများစာရင်းရှိသည်
23:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 21
ကြီးမြတ်စာရင်း! တချို့ကအကျွမ်းတဝင်မရှိကြဘူး၊ ငါစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဤအရာများမှကျွန်ုပ်သည် Searchmetrics ကိုအများဆုံးအသုံးပြုသော်လည်း Cuutio သည်ထိုစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် (www.cuutio.com)
23:2013 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 28
positionly.com - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိရိယာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒါကိုလှည့်ဖျားတစ်ခုအတွက်ယူပြီးသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပါ။ it ၎င်းသည်သင်၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမည်ဟုသေချာသည်။
ထို့အပြင်ငါဤကဲ့သို့သောပုံကိုချစ်။ အားလုံးအသုံးဝင်သော tools တွေကိုအတူတူထား။ ကောင်းတယ်
24:2013 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 49
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Krystian! စာရင်းထဲသို့သင်တို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
3:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 23
ဟိုင်း! seo rank monitor ကိုစမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်။ အရမ်းကိုကြိုက်တယ်။ ဗားရှင်းအသစ်ထုတ်လိုက်ပြီ။ တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်။
3:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 22
8:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 06
ကျွန်ုပ်တို့၌အခမဲ့နှင့်ပေးချေထားသောအကောင့်နှစ်ခုစလုံးရှိပြီးအသင်းဝင်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောသော့ချက်စာလုံးအတော်များများတွင် SERP ထောက်လှမ်းမှုခြေရာခံခြင်းကိုပေးထားသည်။
8:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 07
15:2014 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 01
မင်္ဂလာပါ၊ ကံမကောင်းတာကတော့စာရင်းထဲမှာမတွေ့ရပါ http://rankinity.com။ ငါဒီစီမံကိန်းကိုသုံးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအချိန်နဲ့တပြေးညီခြေရာခံနေတာ။
15:2014 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 01
26:2014 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 01 မှာ
Great post ဒါပေမယ့်ငါ့အကြိုက်ဆုံး tool က ahrefs 🙂
7:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 4, 26
Meta Forensics ကိုလည်းကြည့်ပါ။ http://metaforensics.io။ ၎င်းသည် desktop tool များဖြစ်သော 'Screaming Frog' နှင့် 'Xenu Link Sleuth' နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ခြားနားချက်၏အဓိကအချက်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများကိုပေးပြီးသုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
ဒီဇင်ဘာ 15, 2014 မှာ 6: 31 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ SEO Tools များစာရင်း။ ကျွန်တော်အရင်ကမတွေ့ဖူးဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Douglas Karr
မတ်လ 17, 2015 မှာ 6: 38 AM
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုနိုင်မလား https://ranksonic.com သင်၏စာရင်းထဲသို့ထည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Marketingtechblog သုံးစွဲသူတိုင်းအားအထူးလျှော့စျေးပေးနိုင်ပါသည်
မတ်လ 18, 2015 မှာ 12: 35 pm တွင်
ဧပြီ 11, 2015 မှာ 4: 28 pm တွင်
ကြီးမြတ်စာရင်း! အဲဒီ tools တွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းပေမယ့် RankScanner ကိုမေ့သွားတယ်။ အဲဒါကိုအပတ်စဉ်သုံးပြီး၊ ငါထင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလွဲရင်၊ ဘယ်စီးပွားရေးအတွက်မဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ကဖော်ပြချက်ထိုက်တန်ပါတယ်စဉ်းစားမိတယ်။
ဧပြီ 11, 2015 မှာ 4: 40 pm တွင်
8:2015 pm မှာဇွန် 10, 34
RankSonic သည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုအချိန်တိုအတွင်းအထင်ကြီးသောရလဒ်များကိုပေးသောကြောင့်ကြီးမားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုသင်ခြေရာခံနိုင်သည်။ ငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်အသံ ထိုအကြှနျုပျ၏ website အတွက်သဘောတူညီချက်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကအေးမြ features တွေအများကြီးရှိသည်။
13:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 03
မင်္ဂလာပါ။ ဒေါက်ဂလပ်စ်၊ ဒီစာရင်းမှာငါတို့ရဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာရှိချင်တယ်။ http://www.siteoscope.com
15:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 55
16:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 10
5:2015 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 19
သတင်းအချက်အလက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အစပြုသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ …
8:2015 pm မှာအောက်တိုဘာ 5, 57
ကောင်းပါတယ်၊ ငါ့ကိုသင့်ရဲ့စာရင်းကိုအခမဲ့ seo စာရင်းစစ်တစ်ခုတိုးချဲ့ပါရစေ။ http://seocamel.com
8:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 14
Larry ကိုထပ်ထည့်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
29:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 58 တွင်
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာက tools တွေအများကြီးစျေးကွက်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ အခုငါသူတို့ကမ်းလှမ်းမှုများကိုတစ်ချက်ချင်းစီလေ့လာကြည့်မည်။
ဧပြီ 29, 2016 မှာ 8: 42 AM
ဂရိတ်စာရင်းဒေါက်ဂလပ်! ဈေးကွက်ပြည့်နှက်လာသည်နှင့်အမျှ SEO ကိရိယာများအရေအတွက်လျှော့ချလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ယနေ့လူတိုင်းသည်ကိရိယာများလုပ်နေပုံရသည်။
ဧပြီ 29, 2016 မှာ 3: 38 pm တွင်
သင့်ကိုယ်ပိုင် tool ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ၀ င်ငွေကုန်ကျစရိတ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်နိမ့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ထိုသို့မယုံကြည်ပါ။ တကယ်တော့ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုအခုလုပ်နေတယ်။ ပြtoolsနာကတော့ဒီကိရိယာတော်တော်များများဟာ algorithms ကိုမလိုက်နာတာကြောင့်ရလဒ်တွေထွက်မလာအောင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့သုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတောင်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတုအယောင်သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာခိုင်မာသည့်နောက်ခံရှိ SEO အကြံပေးတစ် ဦး ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအမြဲရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
မေလ 5, 2016 မှာ 1: 01 pm တွင်
ငါ၏အ Bookmarks စာရင်းသို့သိမ်းဆည်းထား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်မင်းမှာ google webmaster tool အကြောင်းပြောရင် bind WMT နဲ့ yandex WMT အကြောင်းဘာကြောင့်မပြောခဲ့တာလဲ။ ya, လူအချို့အတွက်ဂူဂဲလ် = အင်တာနက်အားလုံး၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ bing ကိုပုံမှန် search engine တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသောသူများစွာကျွန်ုပ်သိသည်။
မေလ 5, 2016 မှာ 11: 24 pm တွင်
မေလ 19, 2016 မှာ 1: 40 AM
seo tools တွေအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောစာရင်း။ ငါနီးပါးဤအအသုံးပြုမှုရှိသည်။
26:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 16
alexa.com ရှိ baclink အကြောင်းဖော်ပြလိုပါသလား။
ငါ Alex ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာငါသာငါ့ website ၏ရုံးခန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ဝက်ဘ်ဆိုက်2ရှိပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်တွေမှာအကောင့်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာငါ့ ၀ ီရိယရုံးကိုချိတ်ဆက်နိုင်တယ် ကြင်နာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3:2016 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 25
ဤမျှလောက်များစွာသောအကြီးအကိရိယာများ။ SEM Rush သည်အရောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီး Majestic / Ahrefs သည်အကောင်းဆုံး link aggregaters ဖြစ်သည်။ ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Mozcast ပါ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သည် SERP များ၌လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါ၎င်းသည်သင်သာမကသင်နှင့်အဓိကမွမ်းမံမှုများလည်းရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိပါကစိတ်ချရခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကဲ့သို့ပင်
ဧပြီ 29, 2017 မှာ 7: 30 pm တွင်
SEO ကအရမ်းကျယ်ပြန့်တယ်၊ တကယ်တော့သင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါဟာအစာကြေဖို့အရမ်းလွန်းနေပြီ၊ သင်ဘယ်လိုစတင်ခဲ့တာလဲ မင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးဆိုတော့မင်းရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုငိုနေတယ်လို့ခံစားဖူးပါသလား။
မေလ 1, 2017 မှာ 8: 08 pm တွင်
သင်၏ပရိသတ်အတွက်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ရှာဖွေရေးသည်နည်းဗျူဟာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သင်၏မဟာဗျူဟာသည်သင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားဆက်လက်တန်ဖိုးပေးရန်ဆက်လက်တည်ရှိသင့်သည်။
Marcin - 22 စတူဒီယို
8:2017 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 18
ငါ unamo အကြံပြုနိုင်ပါတယ်, ယခင်ကက positionly ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးအတော်လေးစျေးပေါသည်။
22:2018 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 20
နာမည်ကြီး Douglas, SERPtimizer သည်ထူးခြားသောချိတ်ဆက်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသော seo ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒါ့အပြင်တစ်ခုခုရှိပါသလား။
22:2018 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 25
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Erich, ဆက်ပြောသည်!
24:2018 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 32
ဤသည်အတူတကွစာရင်းဝင်အားလုံးအကြီး tools တွေကို - တောက်ပသောစာရင်းပါ!
ဒီ tool က Cocolyze.com ကိုထပ်ထည့်လို့ရလား။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအင်တာဖေ့စ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာများပါသည့်အဆင့်မြင့်ခြေရာခံခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သို့မဟုတ်အခြားသူများလည်းယင်းကိုစဉ်းစားမိသည်ကိုကြည့်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Frank Strong ပါ
31:2019 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 01
Moz ကဒီစာရင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာသတိထားမိတယ်။ Backlinks များကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်လည်း BuzzSumo ၏ပေးဆောင်ထားသော version ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။
31:2019 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 30
ဝိုးတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖရန့်၊ နှစ် ဦး စလုံးပလက်ဖောင်းအလွန်အသုံးဝင်သောပါပြီ။
2:2021 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 16 တွင်
ကိုယ့် seo tool ကို pls ငါ့ကိုအကောင်းဆုံး tool ကိုလမ်းပြလိုအပ်ပါတယ်?
2:2021 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 26 တွင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အဲဒါအောင်မြင်ဖို့သင်ကြိုးစားနေတာအပေါ်တကယ်မူတည်တယ်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သင်ကြိုးစားနေပါသလား။ သငျသညျပေးဆောင်ရှာဖွေရေးအပေါ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါသလား သင်၏ site ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သင်ကြိုးစားနေပါသလား။ သင်ပြိုင်ဘက်သုတေသနလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါသလား မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ။
8:2021 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 47 တွင်
ငါ့ site ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချင်တယ်
9:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 49
အကြှနျုပျ၏ထောက်ခံချက်နှင့်အတူစတင်ရန်ပါလိမ့်မယ် Google Search ကို Console မည်သည့်ပြissuesနာကိုမဆိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည့်နေရာတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည် Pagespeed ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း သင့်ဆိုဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် (အခမဲ့) ပြုလုပ်ရန်သင်လုပ်လိုသည် SEO စာရင်းစစ်ပြီးနောက်၊ သင်သည်ပြိုင်ဘက်များအားတိုက်ရိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ပြီးသင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်သင်၏စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ အဲဒါအတွက်ငါသုံးတယ် SEMrush.
18:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 30
ငါ ahrefs နှင့် Moz Free SEO Tools များကိုသုံးပြီးလူတိုင်းကြိုးစားသင့်သော SEO tools များဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သတင်းအချက်အလက်အချက်အချာအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်၎င်းကိုရယူလိုသည်။ Doodle ဒစ်ဂျစ်တယ် ) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
19:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 20
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ် SEOperformance ကိုခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံး SEO tool တစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကိရိယာအများစုဟာငါ့အတွက်လုံးဝအသစ်စက်စက်ဖြစ်တယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သော့ချက်စာလုံးခြေရာခံကိရိယာတွေကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမကြာသေးမီက Serpple စစ်ဆေးရေးကိရိယာတစ်ခုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်ကိရိယာကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်။ နောက်လာမည့်နေ့များတွင် SEO အတွက် SERP Checker tool ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသင်ရေးနိုင်ပါသလား။ ဒါကငါလိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်သမားတွေကိုကူညီလိမ့်မယ်။
19:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 43
Rachael ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါစာရင်းထဲမှာ Serpple ကိုထည့်ပြီးပါပြီ။
22:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 7, 42
မတ်လ 16, 2021 မှာ 2: 18 pm တွင်
နီးပါးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သင်၏စာရင်းထဲတွင်လူတိုင်း။ သို့သော်လည်းငါသည် google ကိုယ်ပိုင် tool ကို GWM ကိုနှစ်သက်တယ်။ အကောင်းဆုံးတစ်ခု ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုက်
မတ်လ 16, 2021 မှာ 7: 15 pm တွင်